Top Siyaabaha Bedelka Videos ka Mac si iPhone oo ka iPhone si Mac
Haddii aad qabtid wax dhibaato ah ee videos ka iPhone gudbaayo Mac ama syncing videos ka Mac si iPhone, waxaad eegi kartaa in qayb ka mid ah la xiriira si ay u bartaan sida loo xaliyo dhibaatooyinka. Maqaalkani waxa uu daboolayaa 3 qaybood:
Qaybta 1. Sida loo soo dejinta Videos si iPhone on Mac
Qaybta 2. Top Siyaabaha Bedelka Videos ka iPhone si Mac
Qaybta 3. bixin: Transfer Videos ka Mac si iPhone & ka iPhone si Mac
Nuqul Video inay iPhone on Mac aan Lugood
Nidaameed Videos ka Mac si iPhone la Lugood
Haddii video aad u socoto si ay u gudbiyaan ka Mac si iPhone aan ay taageerayaan Lugood, ama aad ku socoto in ay isticmaalaan Mac kale in aad nuqulka videos in aad iPhone, waxaad isku daydaa inaad Wondershare TunesGo Retro (Mac) . Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u gudbiyaan dhow video kasta oo ka Mac kasta si iPhone la soomi wareejinta xawaaraha. Oo marna ma tirtiro wixii xog ah oo ku saabsan iPhone. Eeg sida loo isticmaalo si ay u gudbiyaan videos ka Mac si iPhone aan Lugood.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Wondershare TunesGo Retro (Mac)
Riix badhanka Download si aad u hesho xirmo rakibo u Wondershare TunesGo Retro (Mac). Ka dib markii ay soo degsado, waxaa isla markiiba aad Mac dajiyo. Waxa ay taageertaa OS X 10.11, 10,10, 10.9, 10.8, 10.7 iyo 10.6 buuxda. Waxaa Launch iyo xiriiriyaan iPhone aad Mac via cable USB ah.
Fiiro gaar ah: waxaan ku bixiyeen Wondershare TunesGo Retro Windows version maxkamad free halkan aad, haddii aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan videos ka PC si iPhone.
Tallaabada 2. Nuqul ka Videos Mac si iPhone
Waxaad ka arki kartaa waxa jira tab Movies galeeysid ah. Waxa Guji si aad u aragto guddi gacanta video ah. In uu furmo, waxaad ka arki kartaa tab dar. Waxaa Click iyo in kor pop ah, caleenta aad videos. Riix Open si ay u gudbiyaan videos ka Mac si iPhone si toos ah. Geedi socodka oo dhan videos ka Mac gudbaayo iPhone la Wondershare TunesGo Retro (Mac) qaataa dhowr ilbiriqsi. Haddii video aad wareejiyo si aad iPhone aan ay taageerayaan aad iPhone, ka dibna waxaa pop ah ilaa kuu sheegaysa in ay marka hore iyaga loogu badalo. Just guji badalo. Ka dib qaab beddelidda, video loogu wareejin doonaa iPhone goobtii.
Haddii videos aad qorsheyneysa inay u hagaagsan ka Mac si iPhone waa in MP4, M4V, ama qaababka MOV, markaas waxaad isticmaali kartaa Lugood inay saaray aad Mac. Haddii aan, waa inaad isku daydaa Wondershare TunesGo Retro (Mac) si ay u gudbiyaan videos ka Mac si iPhone. Waxaa loogu badalo doonaa iPhone leheyn videos si iPhone qaab saaxiibtinimo. Hoos waxaa ku qoran talaabooyinka la qaadayo si hagaagsan videos ka Mac si iPhone la Lugood.
Tallaabada 1. Ku dar videos in Lugood
Burcad Lugood iyo guji Lugood File menu oo waa dhinaca midig oo Apple logo yar ee bidixda xagga kore. Riix Add to Library xitaa your computer u videos in aad rabto in aad wareejiso ka Mac si iPhone iyo iyagoo aad ku dartid Lugood Library.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone aad Mac
Isticmaal cable USB iPhone in ay ku xidhmaan aad iPhone aad Mac. Riix Lugood View menu> Show galeeysid. Ka dib markii in, by default, waxa aad ka arki kartaa iPhone ka yar yahay AALADAHA galeeysid ah. Riix si aad iPhone. Markaas dhinaca midig ee suuqa, waxaad ka arki kartaa Movies tab.
Tallaabada 3. Stream Video ka Mac si iPhone
Guji ka Movies tab dhinaca midig ee Lugood Windows. Markaas ka fiiri doorasho nidaameed Movies . Ka dibna waxaad arki kartaa in videos aad daray in Lugood Library hore u muuqdaan in aagga Movies. Fiiri kuwa loo baahan yahay oo guji Codso si ay u gudbiyaan videos ka Mac si iPhone.
Video Tutorial: Sidee si ay u gudbiyaan Video ka Mac si iPhone
Waxaa jira dhowr xal sida ay u gudbiyaan videos ka iPhone si Mac. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah xalka soo socda si aad hadafkaaga:
Bedelka Videos ka iPhone si Mac la All-in-mid Solution (Video kasta oo ku iPhone)
Videos Import ka iPhone si Mac la kulanka xiisaha / iPhoto / Ciidamada Image (iPhone toogtay Videos)
Hel Videos ka iPhone si Mac via Email (iPhone toogtay Videos)
Haddii aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan videos ka iPhone si Mac, kaliya ma ahan iPhone toogtay videos, laakiinse waa waxyaalahaas oo aad soo bixi ama syned in aad iPhone, weeyna u maleeyeen in aad u isticmaashid qalabka dhinac saddexaad taas loo sameeyo. , Waxaad Haddii kale iyaga ma awoodi karaa inuu wareejiyo ka iPhone si Mac. Halkan, waxaan ku talinaynaa in aad isku daydo ka xalka oo dhan-in-ka mid ah - Wondershare TunesGo Retro (Mac) . Waxay kaa caawin doona inaad si geliyaan wax video ka iPhone inay ka kaaftoomi Mac si xor ah. Oo waa inaad ku samayn kartaa in 2 talaabooyin fudud.
Tallaabada 1. Download oo ku xidh aad Mac. Waxaa hubaal ah, haddii aad Mac waddaa in OS X 10.6 ama ka dib, waxaa jira dhibaato incompatibility lahayn. Ka dib waxa ay ku rakibidda, waxaa isla markiiba abuurtaan.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone aad Mac via cable USB ah. Ka dibna waxaad arki kartaa iPhone u muuqataa in Wondershare TunesGo Retro (Mac) uu furmo suuqa ugu weyn. Ka dibna waxaad ka heli kartaa videos off iPhone si Mac.
Si ka iPhone wareejiyo iPhone videos toogtay Mac, guji Photos tab. iPhone toogtay videos yihiin mooyee meesha photos iPhone toogtay meeye. Dooro videos doonayay oo guji dhoofinta in videos ka iPhone u hesho in ay Mac.
Si aad u wareejiyo kale videos iPhone ka iPhone si Mac, guji tab Movies. Ka dibna dooro videos uu furmo suuqa xaq iyo guji dhoofinta. Qeex gal ah ku saabsan Mac si loo badbaadiyo iPhone kuwaas dhoofiyo videos.
Import Videos ka iPhone si Mac la kulanka xiisaha / iPhoto / Ciidamada Image (iPhone toogtay Videos)
Haddii aad u baahan tahay oo kaliya in ay soo dhoofsadaan videos iPhone shot ka iPhone si Mac, waxaad samayn kartaa inta badan Mac codsiyada dhisay-in, sida kulanka xiisaha iyo Ciidamada Image. Labada iyaga ka mid ah ay awoodaan si ay u gudbiyaan iPhone videos toogtay ka iPhone si Mac. Oo haddii aad ku rakiban iPhoto aad Mac, waxaad isticmaali kartaa iPhoto si aad u samayn. Tallaabooyinka u adeegsada in ay geliyaan videos ka iPhone in ay Mac ku dhowaad isku mid yihiin. Halkan waxaan iPhoto qaado sida tusaale in uu ku tuso sida loo sida ay u dajiyaan videos iPhone shot ka iPhone si Mac.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone aad Mac via cable USB ah. Hubi in ay ku xiran yihiin si guul leh. Ka folder Codsiga aad Mac ah Burcad iPhoto. Haddii aadan ogayn meel ay ka yahay, isticmaali Spotlight in ay baadhaan, waayo. By default, waxaad arki kartaa in iPhone oo dhan toogtay videos iyo sawirka waxaa lagu soo bandhigaa in iPhoto.
Tallaabada 2. Dooro doonayay videos guji Import soo xulay . Markaas habka Keenista bilaabmin. Next, marka uu suuqa kala booda u muuqataa, kuu sheegaysa in ay tirtirto Video on Your iPhone? Haddii aad rabto in aad ka saarto video ka iPhone ka dib markii ay soo degida si Mac, waxaad riixi kartaa Delete Video . Ama guji Hayso Video . Ka dibna waxaad arki kartaa videos yihiin laga keeno ee iPhoto on Mac.
Haddii size ee videos in aad ku socoto si ay u gudbiyaan ka iPhone si Mac ma aha in weyn, waxaad isku dayi kartaa in iyaga email. Waa kuwan tallaabooyinku:
Tubada app icon Photos aad iPhone iyo dedeg Roll Camera. Laga soo giringiriya Camera, waxaad ka arki kartaa videos ee aad toogtay aad iPhone. Tubada video aad u baahan tahay ka dibna tubbada icon la kor ku ganay. In ka-up pop, guji Mail . Next, buuxi info iyo diri video ah cinwaanka emailkaaga. Ka dib markii diraya video ah, oo aad ka furan kartaa browser web on your Mac si uu u furo email. Download video ka email si aad Mac. Taasina waa sidii ay u soo bixi video ka iPhone si Mac.
Su'aasha # 1: Sida loo wareejiyo video anigoo ka iPhone 5 si aan Mac? Waxaan leeyahay iCloud oo Photo Stream. iPhoto ma muujiyaan aan kor mid ka mid ah videos aan. Waxaan arki dadka qaar waxay yidhaahdaan "email" - waan garanayaa ma ISP in uu oggolaan in wax le'eg video ah in la saxafadeed.
Jawaab: Haddii video ku toogteen aad iPhone waa mid aad u weyn in ay email si Mac, aad leedahay fursado kale, sida iyadoo la isticmaalayo qalab dhinac saddexaad in vide ka iPhone wareejiyo Mac si toos ah, ama isticmaalka kulanka xiisaha leh ama qabashada Image aad Mac in ay dajiyaan videos ka iPhone si Mac. Si aad u ogaatid wixii faahfaahin ah ee siyaabaha kor ku xusan, eegno qaybaha soo socda.
Su'aasha # 2: Waxaan uploaded video ah in aan MacBook oo aad rabto in aad nuqulka video ka aan Mac si aan iPhone. Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa Lugood kaliya waxay diidaan inay hawshoodaan. Sidee baan video ka Mac bedeli karaa iPhone?
Jawaab: Haddii aad leedahay wax dhibaato ah ee la isticmaalayo Lugood si ay u gudbiyaan videos ka Mac si iPhone, aad u baahan tahay qalab dheeraad ah si ay nuqul ka videos ka Mac si iPhone aan Lugood.
Nuqul Music ka iPhone si Mac
Dhoofinta iPhone Photos si Mac
Xiriirada kala iibsiga ka iPhone si Mac
Kaabta iPhone Xogta Computer Mac
Copy Songs si iPhone aan Lugood
Playlist ka iPhone dhaqaaq Lugood
Content ka Android dhaqaaq iPhone
Demi ka iPhone in Android
Best iPhone Apps Waxaad u
Xogta Suuqa ka Samsung si iPhone
Tansee iPhone SMS Transfer Alternative si ay u gudbiyaan SMS ka iPhone in Computer
Sidee inuu ka soo kabsado kaadhka xusuusta on Mac iyo Windows
Mac update wararka xanta ah ee 2014
Best 6 Mac Remote Apps Si fudud Koontorool Mac ka Android
Adobe Photoshop CS5 Extended maxkamad Mac
Top 10 Rinjiga DVD Best u Mac
> Resource > Mac > Guides: Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka iPhone si Mac Mac iyo in iPhone